EVY's Kitchen: မုန်ညှင်းကြက်သားငါးပိကြော်
Look so good ! I'll try.Thanks for sharing,sis !
မချက်ဖူးသေးဘူး နည်းလေးယူသွားပြီ Evy ရေ။ အရသာရှိမဲ့ပုံလေးပဲး) ကျေးဇူး။
မစားဖူးသေးဘူး အိရေ ချက်စားမယ်
This looks very delicious ... if only I could read the instructions!
ဒီဟင်းလေး ကြိုက်လိုက်တာမှ အရမ်းပဲ ဗိုက်ဆာနေတဲ့အချိန်မှ ဒီဟင်းကိုတွေ့တော့ ပိုဆာသွားတယ်...